Iza no nandresy tamin'ny hazakazaka bisikileta Italiana? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Hazakazaka bisikileta italiana - vahaolana amin'ny
Hazakazaka bisikileta italiana - vahaolana amin'ny
Iza no nandresy tamin'ny hazakazaka bisikileta Italiana?
Fialan-tsasatra dimy amin'ny fitsidihana lehibe voalohany amin'ny vanim-potoana. Egan Bernal any Kolombia (Grenady INEOS)Nandresyny 2021 Giro d'Italia any Milan,Italia, ny alahady, lasa Colombia faharoa ihanymandresy ny Italianafitsidihana lehibe.1. 2021.
Ankoatry ny fomban-drazana manankarena, ny bisikileta Bianchi dia mitovy dika amin'ny loko iray noho ny mpanamboatra bisikileta hafa: Celeste, turquoise hatsatra. Bianchi dia nanohana ny mpitaingina azy voalohany, Giavanni Tomasello, tamin'ny 1899, ary 15 taona taty aoriana dia namokatra bisikileta 45000 isan-taona ity orinasa ity ary koa moto 1.500 sy fiara 1.000. Ary izy ireo dia nivarotra bisikileta 70000 manaitra isan-taona tamin'ny 1935, raha ny bisikileta Bianchi no voalohany nampiasa ny zava-baovao noforonin'i Campagnolo, rafitra iray niova ho vy nantsoina hoe Cambio Coursa, miaraka amina derailleur any aoriana izay nampivadika ilay rojo amin'ireo vodin-tany efatra azo alaina ao 1939 taona Giuseppe Olmo koa dia nametraka firaketana an-tsoratra ora vaovao tao amin'ny sambo Bianchi.
Ilay Celeste mitokona dia mbola hita eo amin'ny faritra ankehitriny, tarihin'ny ekipa Holandey mpizahatany eran-tany Lotto NL-Jumbo, izay manana zana-kazo telo hafa azo isafidianana, amin'ny maodely Oltre, Specialissima ary Infinito. Mety manontany tena ianao izao hoe avy aiza ny volon'ny Bianchi miavaka, i Edoardo Bian chi dia nampianatra ny Mpanjakavavy Margherita ny fomba hitondra bisikileta ary noho ny olana nahazo azy dia nahazo fanendrena mpanjaka na tombo-kase izy izay namela azy hanana ny tampon'ny Bianchi teo amin'ny toerana rehetra. (mozika italiana ambony) Colnago dia natsangana tamin'ny 1952 tany Cambiago, Italia avy amin'i Ernesto. nanangana an'i Colnago ary nanangana laza haingana ho iray amin'ireo mpanamboatra zana-kazo tsara indrindra eran-tany.
tombony amin'ny bisikileta hiit
Ny fahatongavan'i Miguel Indurain teo amin'ny sehatra manerantany tamin'ny 1991 dia nitondra an'i Pinarello tany amin'ny toerana vaovao, ny Espaniola nandresy Tour de Franceson dimy nisesy andiany pinarellos manokana, tamin'ny 1994 no taona farany nandresena ilay fitsangatsanganana tamin'ny moto vy. Tamin'ny 1995, Indurain dia nitondra fiara Keral Lite vita amin'ny aliminioma ho an'ny fandreseny farany, niaraka tamin'i Bjarne Riis naka ny fandresena tamin'ny fandresena '96 tamin'io fe-potoana io ihany, raha Jan Ulrich kosa dia nandresy tamin'ny fandresena fito hatrany ho an'ny marika tamin'ny fandresena ny 1997 Tour Complaced Pinarello Paris tamin'ny alimina vita amina lasitra vita amina TIG vita amina Columbus tubing TT dia nitohy hatramin'ny taona 1990 ary namoa, nanampy ny fikaolojian'ny Indurain tsy metaly, niaraka tamin'ny fisokafan'ny bisikileta TT voalohany an'ny orinasa, ny Espada, tamin'ny 1994, rehefa Indurain namaky ny firaketana izao ora izao ary nanaparitaka kinova an-dalambe iray, nandrava ny andrana. Tamin'ny taonarivo vaovao, ny Printsy dia nanambara ny zana-kazo vaovao misy tariby fibre karbaona indrindra, ary vao tsy ela akory izay ny andian-dahatsoratra Dogma nandresen'i Bradley Wiggins ny 2012 Tour de France.
Niova mandrakizay ny fiafaran'ny marika tamin'ny 1924 rehefa nanao sonia fifanarahana maharitra iray i Alfredo Bindato, ilay ekipa. Manan-talenta eo amin'ny sehatry ny fandraharahana izy satria nahavita fahombiazana lehibe niaraka tamin'i Palmarès i Binda, anisan'izany ny fanontana dimy an'ny Giro d'Italia, lohateny World Road telo, Tour efatra an'i Lombardis ary fanontana roa an'ny Milan-San Remo. Raha ny marina dia nanjakazaka tokoa i Binda ka ny mpikarakara Giro dia nandoa azy mitovy amin'ny fandresena ankapobeny tao Giro mba hialana amin'ny famoahana ny hazakazaka tamin'ny 1930 mba hamelomana indray ny fahalianana amin'ny fampisehoana olona tokana fanindiminy.
Azo antoka fa nianatra zavatra betsaka aho; Manantena aho fa izany koa, mazava ho azy. Fa tiako ho fantatra hoe inona ireo marika bisikileta malaza izay tianao ho hita ao amin'ny lahatsoratra ho avy. Avelao etsy ambany ny hevitrao, ary raha mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny GCN ianao dia azonao atao maimaim-poana izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tany na aiza na aiza eto amin'ny efijery eto.
Raha efa nijery an'ity lahatsoratra ity ianao dia mieritreritra aho fa mampiasa teknika bisikileta ianao, ka ahoana ny fikitihana fotsiny eto ambany? ho an'ny fampisehoana teknolojia GCN vaovao vaovao sy mamirapiratra. Ary tongava eto fotsiny ho an'ny Retro mifanohitra amin'ny hetsika maoderina.
Inona ilay hazakazaka bisikileta malaza any Italia?
Iza no nahazo ny Giro d'Italia 2020?
The Giro d'Italia (Italianafanononana? Anglisy: Fitsidihan'nyItalia; fantatra amin'ny anarana hoe Giro) dia dingana marobe isan-taonahazakazaka bisikiletanatao voalohany indrindra taoItalia, raha manomboka amin'ny, na mandalo firenena hafa koa.
The Giro d'Italia, iray amin'ireo fitsangantsanganana lehibe telo. Fa maninona no henjana tokoa ity hazakazaka mandritra ny telo herinandro mahery setra ity? Fa maninona no misy fotoana toa izao? Ary ity? Eny, amin'ity lahatsoratra ity dia hofaritako izy io hahafahantsika mahatakatra ny antony mahatonga ity hazakazaka ity ho sariohatra, nefa amin'ny fomba lozabe. Ankehitriny dia manao akanjo T-shirt GCN Italia Giro aho.
Eny, faly amin'izany. Teraka tamin'ny taona 1909 ny Giro d'Italia ary mitovy amin'ny Tour de France, teo izy mba hampiroboroboana ny gazety antsoina hoe La Gazzetta dello Sport, izay midika ara-bakiteny hoe 'Gazety Fanatanjahantena'. Io no sanganasan'ny tonian-dahatsoratry ny tanora tonian-dahatsoratra antsoina hoe Tullo Morgagni ary namely azy ny gazety mpifaninana, Corriere della Sera.
Tamin'ny volana Aogositra 1908 dia nambara fa hisy ny Giro d'Italia. Ka amin'ny 13 Mey 1909, ny fanontana voalohany an'ny Giro dia hitranga avy amin'ny iray amin'ireo tanàna lehibe any Italia - eny, Milan. Sa Milan.
2,447 km ny halaviran'ny Giro d'Italia andiany voalohany. Nozaraina ho ambaratonga 8, avy any Milan dia namaky an'i Chieti, Naples, Roma, Florence, Genoa, Turin hatrany Bologna, ary nifarana tany Milan indray. Ny halavan'ny hazakazak'ity hazakazaka ity dia 28 kilometatra ary feno habibiana tanteraka! Ary izany dia tena mampiseho amin'ny isan'ny mpamily nisoratra anarana sy ny isan'ny mpamily niampita ny tsipika fahatongavana. Mpamily 166 no nisoratra anarana tamin'ity hazakazaka ity ary 49 ihany no tafaverina tany Milan.
Ary tena mampiseho izany ny habibiana nataony. Hatrany am-piandohana, ny Giro d'Italia dia nahazo laza ho lozabe izaitsizy, izay nanome laza be azy. Mihabetsaka ny olona te hiaina ny Giro, ary misy ny milaza fa tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nahatratra ny voninahitra ny Tour de France.
Betsaka ny olona eran'izao tontolo izao no te-handray an-tanana an'ity Maglia Rosa malaza ity. Ankehitriny, misy vintana lehibe henonao momba ny Maglia Rosa, na farafaharatsiny mahita sary bisikileta misy mpitaingina mitafy ireo loko mavokely malaza. Ny Maglia Rosa dia noforonina tamin'ny 1931, ary nanjary ireo loko mavokely ireo satria mavokely ny gazety La Gazetta ka afaka nijoro teo amin'ny talantalana, na farafaharatsiny niavaka.
Ny Maglia Rosa dia omena ny mpitarika ny hazakazaka. Ny mpamily izay mahavita ny lalana rehetra sy ny zotra manontolo ao anatin'ny fotoana fohy indrindra dia mandresy an'i Maglia Rosa, ilay mpandresy amin'ny ankapobeny. Fa maninona no sarotra be? Ary maninona no nohajaina fatratra ny Maglia Rosa? Rehefa mijery ny sarintanin'i Italia dia tena sarotra ny tsy mahita ireo tendrombohitra - ny Alpes, rojo lehibe kokoa sy avo kokoa izay manasaraka ny saikinosy amin'ireo mpiara-monina aminy: France, Switzerland, Austria, ary Slovenia - tsy tendrombohitra kely ireo, miaraka amin'ny sasany amin'ireo tendrombohitra avo indrindra manodidina ny 5000 metatra.
Toy io fiakarana malaza io, ny Monte Bianco, avy eo dia misy ny Tendrombohitra Apennine. Tsy dia avo loatra izy io, fa azo antoka fa hatramin'ny Alpes no lava. ary midadasika kokoa, mizara roa ny saikinosy.
Ireto tandavan-tendrombohitra ireto dia ivon'ny tontolon'ny Italiana, kolontsain'i Italia, fa ny ankamaroany dia ampahany lehibe amin'ny hazakazaka malaza any Italia. Ireo tandavan-tendrombohitra ireo dia nanjary coliseum amin'ny fifaninanana bisikileta malaza. Ireo mpankafy ny fanatanjahantena dia mirohondrohona mankeny an-tampon'ny tendrombohitra hijerena ny maherifon'izy ireo miady eny amin'ny tehezana mideza, mamorona atmosfera tsy misy toa izany.
Eto no mandresy sy resy ny hazakazaka, eto no ahazoanao fotoana betsaka, fa etsy andaniny, eny mety ho resy koa ianao. Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny havoana an-tendrombohitra dia nahatratra ny ampahatelon'ny zotra Giro iray manontolo ary ny dingana lehibe, ny ankamaroany ary ny fiakarana an-tampon'ny tendrombohitra toa ny faran'ny Mpanjakavavy dia tamin'ny faran'ny telo herinandro, ary teo no niadiana ny Maglia Lasa masiaka be i Rosa. Ny toetr'andro koa dia nandray anjara lehibe tamin'ny fanaovana an'ity hazakazaka ity ho hazakazaka ho an'ny lehilahy henjana.
Azo inoana fa hamely ny mpitaingina ny toetr'andro ratsy amin'ny fotoana sasany amin'ny làlana, indrindra rehefa mitondra any an-tendrombohitra. Ny mari-pana ambany, ny lanezy, ny ranonorana, na ny oram-be aza dia hisy fiantraikany amin'ny mpitaingina azy rehefa tonga any an-tampony. Ary ahoana no ahafahantsika manadino ireo seho mahatsikaiky an'ny Galibier feno lanezy 2013 ao amin'ny Giro d'Italia? Moa ve tsy mafy io hazakazaka io raha tsy tafiditra ny toetr'andro ratsy Tsy sarotra ho an'ireo mpifaninana GC fotsiny izany.
khs bisikileta famerenana
Ny Maglia Rossa, ilay lobaka mena, ary avy eo ny Ciclamino, dia nampidirina tamin'ny 1966. Nomena ny sprinters ary mifototra amin'ny rafitra isa izay misaraka tanteraka amin'ny Maglia Rosa. Niteraka fifaninanana tamin'ny fifaninanana izany ka mendrika ny hiady amin'ny sehatra fisaka, izay tsy midika hoe andro mora.
Nanjary haingana be ny andro fisaka ary tsy afaka niala sasatra ny mpitaingina. Ie, tsy andro fialantsasatra, andro tsy mora, izay midika fa nitohy ity hazakazaka ity ary nitohy hatrany.
Tsy mbola nifaninana tamin'ny Giro d'Italia mihitsy aho izao, saingy fantatro ireo tarehy fantatro vitsivitsy manana izany. Fa maninona no sarotra be ny Giro d'Italia? Marina, fa maninona no henjana be ilay Giro? Tena nieritreritra ilay Giro aho androany, nijery ilay boky fifaninanana taloha aho ary manana ny nomeraonako taloha eto, andao jerena raha azoko aseho anao izany. Andao handeha 114, heveriko fa ny antony dia tena sarotra satria mahery setra ny fiakarana any Italia, mideza be izy ireo, ny firongatry Giro tsy misy fitsaharana dia lava - lava be ny dingana, nefa koa ny famindrana? Tadidiko fa andro vitsivitsy isika dia mety mifoha amin'ny enina ora ary mampatsiahy anao aho fa nisakafo hariva tamin'ny misasakalina tamin'io andro io ihany isika.
Nahavita in-dimy ny Giro d'Italia aho ary mieritreritra aho fa sarotra be ity hazakazaka ity satria manana fiakarana lava sy lava any Italia isika. Ny antony faharoa dia ny ahitanao arabe tery any Italia. Ao amin'ny peloton dia azonao atao ny mamela ny adin-tsaina any aoriana satria te-hijanona eo aloha fotsiny ny tsirairay mba hinoako ary mieritreritra aho fa hazakazaka henjana angamba ny Giro noho ireo antony roa ireo.
Fa maninona no mafy be ilay Giro? Lazaiko anao satria korontana be ny raharaha amin'ny farany. Seho lehibe io, festival lehibe, mifanafika ny rehetra ary tsy fantatrao izay antenaina. Tsy lavorary ny arabe ary miandry ny herinandro farany fotsiny ny tsirairay ao amin'ny Dolomites.
Monster dingana, 250km lava, dimy mandalo, ary tena tsara isan'andro - izany no Giro! Tsy ampoizina ary izany no mampiavaka azy sy mampiavaka azy. Fa maninona no sarotra be ilay Giro? Satria misy dingana lava be foana ary tena fiakarana lava sy sarotra, ny faharoa heveriko fa fantatrao, io no Grand Tour voalohany amin'ny taona, ary tena voatosika ny rehetra hanandrana zavatra tsara, zavatra iray tena ilain'ny Maglia ciclamino ho an'ny rehetra mpamily, izany no mahatonga azy ireo mivezivezy amin'ny andalana rehetra ary manandrana mahazo teboka iray amin'ny farany. Ary izany no mahatonga antsika tsy hanana fiadanam-po mihitsy.
Fantatrao, mino aho fa ny Giro d'Italia no sarotra kokoa amin'ny Mazava ho azy fa ny Grand Tours rehetra. Heveriko fa ny nahatonga ny Giro d'Italia ho sarotra tamiko manokana dia ny hoe ny olon-kafa rehetra tamin'ny hazakazaka dia somary nihatsara kely kokoa, izay manasarotra ny fihazonana azy, fantatrareo izany. Saingy nisy dingana feno habibiana vitsivitsy tao amin'ny Giro voalohany, izay nitaingenako tamin'ny 2009, 240 km, andro lava tao anaty lasely.
Fa iray hafa tena tadidiko - 237 km teo amin'ny sehatra 16 izy io, saingy tany an-tendrombohitra izy io ary andro mangidy. Mamy izany satria nandresy ny mpiara-miasa amiko Carlos Sastre, nizara ny loka, saingy nangidy satria naharitra adiny fito sy roa ambin'ny folo minitra izy vao nandresy. Mazava ho azy, niverina lavitra tamin'ny voalohany tamin'ny grupettos teny an-dalana aho, efapolo minitra no tena marina, ka 7 ora sy 50 minitra teo amin'ny lasely ho ahy.
Minoa na tsia, folo minitra ao aoriako dia Grupetto faharoa. Ary raha te-hanadino azy io, dia tsy maintsy namily ny tendrombohitra nankany amin'ireo bus an'ny ekipa izahay, ary avy eo nisy famindrana adiny efatra tany amin'ny hotely manaraka. Tadidiko tamin-kabibiana, hadinoko be ny fanaintainana, saingy misy zavatra mbola eo e.
Tsy misy hazakazaka mora, ka any ianao no manana - ny fitsidihana Grand sarotra indrindra amin'ny kalandrie bisikileta? Ampahafantaro anay ny hevitrao momba ity hazakazaka tsara tarehy ity amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany Ary manana fitsapan-kevitra momba ny fampiharana GCN ihany koa aho, koa mandehana mifidy. Ahoana ny fahitantsika ny T-shirt Giro-ko?
ww fampisehoana miaraka amin'ny
Oviana no nanomboka ny Giro d'Italia?
Nandresy ny hazakazakaTao Geoghegan Hartan'i Great Britain, izay nahavita 39 segondra mialoha ny Jai Hindley any Australia.
Bisikileta inona no nitaingenan'i Julian Alaphilippe?
Ny fanamboarany dia tsy niova tamin'ny taon-dasa, fa ny sasany amin'ireo safidy ataon'ny frantsay dia tena mahaliana - milina aero feno itybisikiletatsy. Ao am-pon'nybisikiletadia ny S-Works Tarmac SL7 frameset. Famolavolana karbaona feno izy io, tsy mandeha irery ny freins disc sy ny fanovana elektronika ary mandany vola milay? 4,250.
Inona no ataon'i Julian Alaphilippe?
Julian Alaphilippe(Deceuninck-QuickStep) 2.3m.
Raha tsorina, Eddy Merckx nobisikileta lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ilay lehilahy nantsoina hoe The Cannibal dia tompon'andraikitra ambonybisikiletatoy ny tsy misy olon-kafa ary nandresy ny hazakazaka manan-danja rehetra dia ny mandresy.
Fandresena mandroso amin'ny dingana 2 ao amin'nyTour de Francedia nanamafy ny satan'i Mathieu van der Poel ho an'izao tontolo izaobisikileta lehibe indrindraeto amin'izao tontolo izao, hoy i Sir Bradley Wiggins.28. 2021.